नसुन्ने ले बोल्दैनन् | पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका नसुन्ने ले बोल्दैनन् – पल्लव साहित्यिक ई-पत्रिका
बूढा सोचमग्न भए- ‘हो त, पहिले पहिले का कुरा झल्झली सम्झना मा आउँछन्। तर हिजोआज का कुरा भने कुन्नि किन हराउँछन् । … यो तेही छोरो हो जसले सानो हुँदा सोधेर थाक्दैनथ्यो र बूढा जवाफ दिएर थाक्दैनथे ।’
सोध्न पनि के के सोध्न भ्याउँथ्यो । जति धेरै सोध्यो इनी चाहिं उति धेरै मख्ख पर्थे। सोच्थे मेरो छोरो जिज्ञासु छ । ठूलै मान्छे हुने लक्षण हो यो ।
“बुवा पुतली किन एति धेरै रंगीन हुन्छ ? पुतली ले होली खेलेर आको हो र ?”
कहिलेकाहीं त बडो शास्ति हुन्थ्यो बूढा लाई बुझाउन । तै पनि नझर्कीकन बुझाउन खोज्थे । उनको बुझाउने तरीका पनि मीठो हुन्थ्यो । एकदिन मन्दिर जाँदा छोरा ले सोधेको थियो,
“बुबा हामी भगवान् का अगाडी केही कुरा माग्नु पर्यो भने मनमनै माग्छौं किन ? किन सबैले सुन्ने गरेर माग्दैनौं ?”
बूढा ले बडो सोचविचार गरेर जवाफ दिएका थिए, “जसले बोलेको सुन्दैन उसले बोल्न पनि जान्दैन र जो बोल्दैन उसले बोलेको नि सुन्दैन । भगवान् ले बोल्दैनन् तेसैले उनले हामीले बोलेको सुन्दैनन् । तर भगवान् हाम्रो मन मा भएकाले मनमनै सोचेको कुरा भित्र बसेका भगवान् ले बुझ्छन् ।” छोरा लाई यो कुरा बुझाउन उनलाई दुई दिन लाग्यो होला । सोच्दा सोच्दै बूढा का आँखा मा आँशु पलाए । तर बूढा ले निश्चय गर्न सकेनन् ती खुशी का आँशु थिए कि पीडाका ।
This entry was posted in कथा, कथा Story, लघुकथा and tagged Lok, mani, Pallawa, Paudel, पल्लव, लोकमणि पाैडेल. Bookmark the permalink.
← सुमन सनम का केही मुक्तकहरूः